Takelaka sinoa tsara indrindra - nohavaozina tamin'ny septambra 2021 | Androidsis
Jose Alfocea | | Android Android, Takelaka Android
Ny tsena takelaka dia tsy toy ny taloha intsony. Taorian'ny firoboroboana voalohany izay nanomboka efa ho fito taona lasa izay, dia nitotongana ny varotra ampahefatry ny telovolana. Ny ankamaroan'ny tsiny dia miankina amin'ilay fampanantenany vitan'izy ireo soloina solosaina, zavatra vao izao, ary ampahany, no nanomboka niaina. Ary etsy ankilany, ny fitomboan'ny haben'ny efijery finday, izay nahatonga ny mpampiasa maro hanary ny takelaka (na hisafidy ny tsy hividy iray) indrindra ireo izay manana habe akaikin'ny an'ny smartphone, satria miaraka amin'ny ny finday dia afaka manao toy ny amin'ny takelaka.
Na eo aza ireo rehetra voalaza etsy ambony, tsy maty ny tsenan-takelaka. Manohy mamoaka maodely vaovao ireo mpanamboatra ary manavao ireo efa ananany eny an-tsena. Misy takelaka saika ho an'ny mpampiasa rehetra, ary koa ho an'ny paosy rehetra. Raha mbola tsy manana takelaka ianao nefa nanapa-kevitra fa tonga ny fotoana hahazoana iray, na raha efa manana takelaka ianao fa fotoana tokony hanavaozana maodely matanjaka kokoa sy maivana kokoa, anio dia hasehontsika anao izay dia ny takelaka sinoa tsara indrindra amin'izao fotoana izao ary ho fanampin'izany, hanome torohevitra vitsivitsy mahasoa izahay mba hahafahanao misafidy ny takelaka mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
1 Ny takelaka sinoa 9 tsara indrindra amin'izao fotoana izao
1.3 Teclast X16 Hery
1.4 Kitendry X16 Pro
2 Ahoana ny fisafidianana ny takelaka sinoa tsara indrindra
Ny takelaka sinoa 9 tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Mandrosoa fa ireto fisafidianana takelaka sinoa tsara indrindra ireto angamba, dia tsy hankasitrahan'ny olona rehetra mamaky antsika, na izany aza. raiso ho toy ny torolàlana izy, ho tolo-kevitra hanampy anao amin'ny safidinao ary koa ny torohevitra nomenay teo aloha.
Manomboka amin'ity takelaka ity isika amin'ny marika Chuwi. Angamba tsy dia re aminao izany, ary azo inoana fa ho faly amin'ny anarany ianao, fa ny marina dia iray amin'ireo takelaka sinoa tsara indrindra io. izany Chuwi Hibook Pro miaraka amin'ny efijery malala-tanana an'ny 10,1 santimetatra miaraka amina vahaolana 2560 x 1600, lehibe iray Bateria 8.000 mAh ary ao anatiny dia ahitantsika 5GHz quad-core Intel X8300 Atom Cherry Trail Z1.84 miaraka amin'ny Intel HD Graphic Gen8 GPU, RAM 4 GB sy fitehirizana 64GB anatiny izay ahafahantsika manitatra 64 GB fanampiny miaraka amin'ny karatra fahatsiarovana. Fa ny tsara indrindra, takelaka roa io miasa miaraka amin'ny Windows 10 sy Android 5.1.
Ilay goavambe sinoa Xiaomi dia tsy afaka mitsahatra amin'ny fisehoana ivelany, ary eto dia miaraka aminy Xiaomi Mi Pad 2, takelaka misy famolavolana tsy lavorary, maivana sy manify ary somary voafehy kokoa noho ilay teo aloha. Izy io dia manana efijery 7,9 santimetatra, Processeur quad-core an'ny Intel Atom X5-Z8500, RAM 2GB, fitehirizana anatiny 16GB sy ny rafitra fiasa Android 5.0 eo ambanin'ny sosona fanaingoana marika MIUI.
Teclast X16 Hery
Raha takelaka ho an'ny asa no tadiavinao, dia mety io no iray amin'ireo safidy tsara indrindra. Izy io dia ny Teclast X16 Power, fitaovana iray misy efijery 11,6 santimetatra, RAM 4 GB ary rafitra fiasa roa Izy io dia miasa miaraka amin'ny Windows 10 sy Android 5.1. Raha ny tena izy dia toy ny solosaina finday kokoa noho ny takelaka fa takelaka io.
Aorian'ilay maodely "Hery" dia averinay miaraka amin'ity ny marika Tsy misy vokatra., fitaovana iray izay "takelaka betsaka" noho ilay teo aloha, azo entina lavitra ary misy endrika mitovy amin'ny takelaka hafa ao amin'ny sokajy misy azy.
Amin'ity tranga ity dia hitantsika ny Efijery Full HD 7 mirefy miaraka amina vahaolana 1200 x 800 megapixel raha ao anatiny kosa dia manana processeur 4 GHz quad-core Intel T8500 Z1,44 izay mety hahatratra 2,24 GHz. 4 GB an'ny RAM ary, indray mandeha, ny faharetan'ny rafitra miasa: Android 5.1 sy Windows 10.
Miverina amin'ny marika Chuwi izahay mba hampisehoana ny maodely takelaka Chuwi Vi10 Pro, fitaovana iray izay afaka mihazakazaka rafitra fiasa roa koa, Windows 8.1 sy Android 4.4 miaraka amin'ny sary Intel HD 7 GHz quad-core Intel HD (Gen 2,16), RAM 2 GB ary efijery 10.6-inch.
Manana a famolavolana tena kantoTena ara-toekarena ihany koa izy io, ary miteraka iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ireo izay maniry takelaka bebe kokoa noho ny fihinana atiny noho ny amin'ny asa.
Teny lehibe izany Lenovo Yoga Tab 3 Pro X90F, takelaka mahavariana misy efijery 10,1 santimetatra IPS miaraka amina vahaolana 1600 x 2560 ao anatiny izay manafina processeur Intel Z8500 quad-core 1,44 GHz miaraka amin'ny RAM 2 GB, Fitahirizana 32 GB anatiny azo velarana amin'ny karatra fitadidiana, Android 5.1 amin'ny maha rafitra miasa sy bateria 10.200 mAh izay mampanantena a fizakan-tena "hatramin'ny 18 ora" amin'ny fiampangana tokana.
Avy amin'ny tanan'ilay mpanamboatra finday avo lenta lehibe indrindra eto Chine izao no niavian'ity Huawei Mediapad M2 10, takelaka mahafinaritra misy efijery 10,1 inch Full HD miaraka amin'ny vahaolana 1920 x 1200 megapixel. Ao anatiny no ahitantsika mpikirakira HiSilicon Kirin 930 (novokarin'i Huawei mihitsy) miaraka amina fotony valo miaraka amin'ny hafainganana 2,0 GHZ. Miaraka aminy, RAM 2 GB, fitehirizana anatiny 16 GB azo ahitam-bokatra, Bateria 6.600 mAh, sensor sensor, Fakan-tsary 13 MP miaraka amin'ny autofocus, f / 2.0 aperture ary flash, ary ny rafitra fiasa Android 5.1 Lollipop eo ambanin'ny soson'ny EMUI 3.1.
Raha takelaka tsara sy mora vidy no tadiavinao, ity Colorfly G708 ity dia mety indrindra, indrindra ho an'ny fampiasana tsindraindray ary hakana azy etsy sy eroa noho ny efijery HD 7-inch HD sy ny vahaolana 1200 x 800, ny processeur MediaTek MT6592 amin'ny 1,5 GHz , RAM 1 GB sy Android 5.0.
Ny marika Cube dia efa fanta-daza, indrindra eo amin'ny sehatry ny smartphone, nefa koa misy takelaka misy kalitao mora vidy toa an'ity Cube i10 ity, fitaovana iray ho an'ny 10,6 santimetatra miaraka amin'ny Intel Z3735F quad-core 1,8 GHz processeur, 2 GB RAM, 32 GB ROM ary rafitra fiasa roa, Android 4.4 ary Windows 10.
Raha efa nandroso tamin'ny voalohany isika, ity dia sosokevitra fohy fotsiny momba ny takelaka sinoa tsara indrindra izay mety ho hitanao eo amin'ny tsena ankehitriny. Araka ny efa hitanao, ny ankamaroan'izy ireo dia "tsindrio" amin'ny lafiny iray ihany: ny rafitra miasa dia tsy havaozina amin'ny kinova farany, na izany aza, efa fantatsika fa olana miteraka fijaliana amin'ny Android izany. Tsy miraharaha an'io, ny iray amin'ireo maodely teo aloha dia ho fividianana tsara, eny, aza adino ny mitady mandrakariva ilay takelaka mifanaraka amin'ny zavatra ilainao, tsy ilay lazain'ny olona anao no tsara indrindra ...
Ahoana ny fisafidianana ny takelaka sinoa tsara indrindra
Efa fantatrao fa ao amin'ny Androidsis dia manandrana tsy manichean be loatra izahay. Na dia mazava aza fa misy singa tsara kalitao kokoa ary singa tsara kalitao kokoa, ary noho izany, misy koa takelaka tsara kokoa noho ny hafa, resy lahatra izahay fa rehefa tonga ny fanosehana, toy ny mitranga rehefa miresaka momba ny telefaona finday isika, ny takelaka tsara indrindra dia ilay mifanaraka amin'ny filàna sy ny andrasan'ny mpampiasa manokana tsirairayIzany hoe, angamba ho anao, izay mazoto amin'ny lalao video, ny takelakao no tsara indrindra, ho ahy kosa, izay manolo-tena amin'ny fanoratana sy ny famakiana ho toy ny hetsika lehibe, ny ahy no tsara indrindra. Ary samy marina isika satria samy manana ny vahaolana tsara indrindra amin'ny filànay.
Saingy tamin'io voalaza io dia misy maromaro toetra fototra izay tokony hotandremantsika mandrakariva tsara rehefa mifidy iray amin'ireo takelaka sinoa tsara indrindra:
Rafitra fandidiana. Mazava ho azy fa eto isika dia hiresaka momba ny takelaka miasa amin'ny Android fa na dia mifikitra amin'ity rafitra ity aza isika dia tsy maintsy misafidy ilay takelaka misy kinova vao haingana kokoa raha azo atao, na dia, araka ny efa fantatrareo, dia matetika izany sarotra.
efijery. Rehefa miresaka momba ny efijery isika dia samy midika hoe ny habeny sy ny hatsarany. Ho an'ny fampiasana mafy, amin'ny asa, na raha manana olana amin'ny fahitana ianao dia torohevitra lehibe kokoa no ampirisihana anao. Ho fanampin'izay, raha hampiasa azy io ianao hijerena sarimihetsika sy andian-tantara maro na hilalaovana lalao dia mila kalitaon'ny sary tsara koa ianao, farafahakeliny, Full HD. Ny mifanohitra amin'izay, raha hanome azy fampiasana azy indraindray ianao dia angamba efijery 7 na 8-inch dia ampy anao.
Portability. Mifandraika mivantana amin'ny haben'ny efijery dia ny anton-tariby. Raha mikasa ny handeha hatraiza hatraiza amin'ny takelaka misy antsika isika, arakaraka ny maha-maivana kokoa sy mora tantanana kokoa, filàna iray izay tsy ho toy izany raha hanaisotra azy ao ivelan'ny trano fotsiny isika.
Hery sy fampisehoana. Indray mandeha indray, ny fampiasana izay homentsika ny takelaka dia ho zava-dehibe. Mazava fa ny hijerena mailaka, hitantanana ireo tambajotran-tseraseranay na hijerena horonantsary ao amin'ny YouTube, dia ho ampy ny processeur mid-range ary ny gigabytes RAM roa. Ankehitriny, raha hampiasa azy io isika hiasa amin'ny fitantanana rindranasa marobe amin'ny fotoana iray, na hanao lalao manankarena sary isika, dia tsy maintsy jerentsika akaiky ilay processeur, coprocessor, gigs an'ny RAM ary mazava ho azy , ny sary.
fizakantena, izany hoe ny fahaizan'ny batterie, fa tsy izany ihany. Ataovy ao an-tsaina fa indraindray ny isa dia tsy ny zava-drehetra ary eo anelanelan'ny takelaka roa misy bateria mitovy amin'izany, ny iray dia mety haharitra kokoa noho ny iray hafa satria ny processeur-ny dia mampiasa angovo bebe kokoa.
Ireo no lafin-javatra dimy ilaina fa tsy maintsy dinihintsika foana rehefa manomboka ny dingan'ny fifidianana isika takelaka sinoa tsara indrindra. Mazava ho azy, manisa ihany koa ny endrika, na dia efa resaka tsiro aza izany.
Ary rehefa fantatray izao izay hotadiavina, tsy mbola nividy ny takelaka sinoa ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Takelaka Android » Ny takelaka sinoa tsara indrindra
Mahagaga. Manolora takelaka misy Android 4
Tsy mila manampy intsony ny hevitro.